हप्ताको बीचमा बिदा दिँदा के होला ? - Arthapage
प्रकाशित मितिः २३ बैशाख २०७६, सोमबार ०७:०८ May 6, 2019
हप्ताका ६ दिन काम गरेर शनिवार बिदामा बस्ने नेपालीहरू धेरै छन् । सातै दिन काम हुने अफिसमा कसैलाई शनिवार, कसैलाई आइतवार, कसैलाई सोमवार गरेर विदा दिने चलन पनि छ । अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालगायत केही संस्थाले शनिवार र आइतवार गरेर हप्तामा २ दिन पनि बिदा दिँदै आएका छन् । तपाईंले अहिले काम गरिरहनुभएको कम्पनीले हरेक हप्ताको बीचमा पनि बिदा दिन थाल्यो भने कस्तो होला ?
तर, यो नीति सबैतिर उत्तिकै सफल र उपयोगी हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन । स्वीडेनको एक नर्सिङ होममा काम गर्ने समय घटाएर दैनिक ६ घण्टामा झारिएको थियो । यो नीतिसँगै कर्मचारीको बिरामी बिदा घटेको थियो भने उत्पादकत्वमा पनि सुधार आएको थियो । तर, बिदाको समय बढेपछि आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्न थप खर्च गर्नुपर्दा कम्पनीको खर्च उल्लेख्य मात्रामा बढ्यो । अमेरिकामै पनि केही स्टार्ट–अप कम्पनीले हप्ताको ४ दिन मात्रै काम गर्ने नीति प्रयोगमा ल्याएका थिए । तर, यसले कम्पनी कम प्रतिस्पर्धात्मक र कर्मचारीहरू पनि पहिलाको भन्दा बढी तनावमा रहेको भेटिएपछि भने काम गर्ने दिन पुनः हप्ताको ५ दिन नै अपनाइयो ।
प्रकाशित मितिः २३ बैशाख २०७६, सोमबार ०७:०८ |
Prevबिन्दु कुँवरले क्यान्सर बिरुद्ध गरेको संघर्ष सुनाउँदा हलमा सन्नाटा छायो
Next५ लाख २० हजार मूल्यको बेनिली मोटरसाईकल कस्तो छ ?